Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny Fitsarana miady amin'ny kolikoly, na ny PAC, ny zandary 1ère classe RAJERY Jean Mexin dia notantanana am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy, noho ny fisandohana andraikitra, fitsikombakombana trafika volamena, fanaovana sy fampiasana hosoka, fanararaotam-pahefana.
Izy ilay zandary nanao sonia taratasy fandraisam-bola 80 000ar ho saran'ny fiambenana sy fanaraha-maso amin'ny fahatongavan'ny fiaramanidina.
samedi, 06 février 2021 21:00
Pilo kely : Gasy zalahy maro colonisé marigny ein
Mpagnano gazety gasy maro nagnazava, nitondra preuve, hatramin'ny conversation tour de contrôle, izay sonore confidentiel, ny itinéraire avion nitondra volamena 73,5kg, ny video Camera de surveillance lazaina tsy nisy.
Tsy nisy natoky, tsy nisy nihetsiky.
Fa vao namoaka fakitira ny mpanao gazety vazaha, bravo be, niazakazaka nifandimby communiqué.
Hividy kérosène moa ve ianao tsy omen'ny Total fakitira, sa ho gadraina koa ilay mpivarotra solika, fa raha tsy nanome solika izy dia tsy afaka nanainga ny 73,5kg.
Gasy maro colonisé, koa vazaha mivolagna, efa izy zay.
samedi, 06 février 2021 18:01
Kitra - Afrika : Afaka milatsaka ho filohan'ny CAF i AHMAD
Nilatsaka ny fanapahan-kevitry ny Kaonfederasiona Afrikanina ny baolina kitra, na ny CAF, fa mahazo milatsaka ho kandida amin'ny fifaninanana izay ho filohan'ny CAF i Ahmad AHMAD, izay filoha amperinasa teo aloha fa nosazian'ny Komitin’ny Etika eo anivon’ny Federasiona iraisam-pirenena ny baolina kitra na ny FIFA, ny 19 novambra 2020, tsy ahazo hiandraikitra ny raharaha baolina kitra mandritra ny 05 taona, miampy onitra 832 tapitrisa Ariary (185 000 Euros), noho ny resaka fanodinkodinam-bola miharo fanararaotam-pahefana no anisany niampangana azy.
samedi, 06 février 2021 15:25
Fitaterana an-dranomasina : Sambo roa nampiahiahy ny olona
Nisy sambo lehibe roa somary mitovitovy mifanaraka, dia heverin'ny olona ho sambo iray mihantsona eny afovoan-drano, ka nampisahotaka ny mpanara-baovao.
Nisy tokoa sambo 2 lehibe tany amin'ny faritra SAVA, izay nijanona tao Vohémar ny 31 janoary 2021 sy ny 03 febroary 2021, ary samy nihazo an'i Toamasina avokoa izy ireo.
Ny sambo voalohany dia i RONALDO II IMO 7510688 niaraka tamin'ny tatsambo 15, ary nanainga tamin'ny 06h05 maraina ny 31 janoary 2021 hiazo an'i Toamasina. Nampidina Kaontenera izy io, ary tsy nisy entana noentiny.
samedi, 06 février 2021 14:28
Miaramanonja : Mipetraka ny fandaminana
Amin'arivony ny olona tonga ety Imerinkasinina, Distrika Avaradrano, maro ireo fandaminana ety an-toerana, ankoatran'ny fanaovana badge, dia misy toerana manokana hakana rano, na hisasana na ho sotroina, arahina ireo fepetra ara-pahasalamana, misy ihany koa toerana manokana hivoahana, misy ny tanty handraisana ireo mety mahatsiaro tsy metimety.
Manohy manentana ireo tompon'andraikitra anadiovana ny toerana sy hitandremana amin'ny afo eny an-toerana. Efa misy rahateo toerana natokana hanariana ireo fako, ankoatr'izay ho entin'ny tsirairay mody any aminy.
Efa miara-misakafo ny rehetra arakarak'izay mahasoa azy, nisy ny fizarana sakafo maivana avy amin'ireo mpikarakara anampy izay efa noentin'ny tsirairay.
samedi, 06 février 2021 14:13
Miaramanonja : Efa vory lamina ny eny Imerinkasinina na mbola maro aza ireo taterina
Nanomboka ny maraina teo dia efa nitatitra ireo olona anarivony maro ireo fiara mpitatitra ireto mpitsangatsangana any Imerinkasinina, izay hetsika karakarain'ny Miaramanonja.
Efa vory lamina ety Imerinkasinina ny maro, na dia mbola misy ihany aza no mbola taterina amin'izao ora efa atoandrotoandro izao.
Betsaka ihany koa ireo nandeha moto sy fiarany manokana, izay nasiana autocollant avokoa ahafahana mandray anjara amin'izany fiarahana izany.
samedi, 06 février 2021 14:11
Ivato : Tonga avy any La Réunion ny Praiminisitra
Nigadona eto Ivato io maraina sabotsy 06 febroary io, tamin'ny 11ora15min ny fiaramanidina manokana TOA 5R-MHR nitondra ny Praiminisitra Ntsay Christian, rehefa avy nijery fahasalamana tany izy omaly zoma 05 febroary, raha niainga ny maraina niaraka tamin'ny vadiny sy olona iray hafa tamin'io fiaramamanidina io ihany.
Avy hatrany moa izy dia nandeha nijery ny ranon'i Sisaony eny Atsimondrano sy ireo fotodrafitrasa anaty kontenera, isan'ireo 8 hapetraka sy hamatsiana rano an'Antananarivo, ary nilaza izy fa miasa ny tenany sy ny fitondram-panjakana mitady vahaolana ho an'ny firenena.
Misy lalàna, hoy ihany izy, amin'ny fanelezana tsaho eto amin'ny firenena, ary miasa amin'ny maha praiminisitra azy ny tenany.
samedi, 06 février 2021 11:04
Fiarahamiasa amerikanina : Amatsy vola tetikasa vaovao maharitra 05 taona hanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka
Tetikasa vaovao maharitra dimy taona no ho vatsian'ny governemanta amerikana vola hanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka eto Madagasikara.
Nambaran’ ny Ambasadaoro amerikana Michael P. Pelletier sy ny Filoha Voalohan’ny Fitsarana Tampony eto Madagasikara, Rajaona Andriamanankiandrianina, ny fisian’ny tetikasa vaovao vatsian'ny governemanta amerikana vola mitentina 4 tapitrisa dolara, izay hanamafisana ny fahafaha-mahefan’ny Fitsarana momba ny Kaonty sy hanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka.
Ny Fitsarana momba ny Kaonty moa dia sampandraharaha ambony eto Madagasikara, miandraikitra ny fanaraha-maso ny fandaniam-bolam-panjakana rehetra, sy ny fanaovana tombana politika ho an'ny Antenimieram-pirenena. Nanambara ny Ambasadaoro Pelletier fa “I Etazonia sy Madagasikara dia toy ny mpirahalahy mianala amin’izao fotoana itadiavantsika ny fandrosoana ho an’i Madagasikara izao ka hananganantsika andrim-panjakana mahomby, matotra, sy mampiaty....
samedi, 06 février 2021 10:54
Raharaha volamena 73.5kg : Fanambarana avy amin'ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny
Ho tohin’ny fanambarana navoakany tamin’ny 14 Janoary 2021, ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny dia mampahafantatra fa mitohy ny fifampiraharahana amin’ny fampodiana eto Madagasikara ireo volamena nogiazana tany Afrika Atsimo sy ireo olona nitondra an-tsokosoko ireo volamena ireo.
Tsiahivina fa ny raharaham-pitsarana tamin’ny 12 Janoary 2021 dia nahemotra ny 1 Febroary 2021. Tamin’io andro io dia nanapa-kevitra ny Fitsarana ao Kempton Park fa ahemotra amin'ny 19 Febroary 2021 indray izany fotoam-pitsarana izany. Mandra- mpahatongan’izay dia mbola tazomina vonjimaika ireo telo lahy voapanga.
Ny anton’ny fanemorana dia ny fisian’ny fitoriana manoloana ny Fitsarana Avo any Afrika Atsimo, izay napetrakin’ny orinasa iray any Dubaï, mitonona ho tompon’ny volamena sy mpampiasa ireo telo lahy tratra, izay mpiara-mitory ihany koa. Miantefa amin’ny Ministeran’ny Polisy afrikana tatsimo ny fitoriana, noho ny fiheveran’ireo mpiampanga fa tsy ara-dalàna ny fitazomana azy telo lahy sy ny entany. Ho tanterahina ny 9 Febroary 2021 izao ny fitsarana mifanandrify amin’izany fitoriana izany.
Ary satria mety hisy fiantraikany mivantana amin’ny fangatahan’ny Fanjakana malagasy izany, dia nandray ny fepetra rehetra ny Fanjakana malagasy hiaro ny fitakiany. Anisan’izany ny fakana mpisolo-vava any an-toerana hisolo tena ny fanjakana sy hanao izay ahazoany rariny amin’ny dingana rehetra ara-pitsarana mahakasika ity raharaha ity.
samedi, 06 février 2021 10:14
Ambasadaoro Amerikana : Nitsidika Ara-pomba Fifanajana ny Filohan’ny Antenimieran-doholona
Nitsidika ara-pomba fanajana ny Filohan’ny Antenimeran-doholona Herimanana Razafimahefa ny Ambasadaoro Michael Pelletier hiarahaba azy noho ny fahalaniany teo amin’io toerana io, sy hanatintra fa “Toy ny Mpirahalahy Mianala isika [Etazonia sy Madagasikara] amin’ny fanamafisana ny demokrasia, fitantanana ary tamberin’andraikitra eto Madagasikara.”
Nilaza ny Ambasadaoro Pelletier fa “mino ny maha-zava-dehibe ny fifandraisan’ny andrim-panjakana toy ny Antenimieran-doholona sy ny vahoaka malagasy izahay. Izany indrindra no nahatonga anay hiresaka momba ireo tetikasa fanohanana an’i Madagasikara."
Nankahery an’Atoa Razafimahefa izy amin’ny fitantanany io andrim-panjakana io, izay manana andraikitra manolo-tsaina ny governemanta manoloana ireo fanamby misy fiantraikany amin’ny fiainan’ny vahoaka Malagasy, ary miantoka ny hisian’ny tamberin’andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny asa ataon'ny governemanta sy ny fanaovana tombana ny politikam-pirenena.